The Apple Tree – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၂ နှစ်နီးပါးက အတ္တကျော်ရဲ့ တေရသမမြာက် (၁၃ ပုဒ်မြောက်) စာ...
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက ပန်းသီးပင်ကြီးတစ်ပင် ရှိသတဲ့။
အဲဒီ့ ပန်းသီးပင်ကြီးဆီကို ကောင်ကလေးတစ်ယောက်က နေ့စဉ် လာလာ ကစားနေကျပေါ့။ အပင်ပေါ်တက်၊ ပန်းသီးတွေကို ဆွတ်ခူး စားaသာက်၊ သစ်ပင်ရိပ်မှာ တစ်မှေးအိပ်၊ ကောင်ကလေးအတွက် သစ်ပင်ကြီးဟာ အဖော်ကောင်းလို့ပဲ ဆိုကြပါစို့ရဲ့။ ကောင်ကလေးဟာ သစ်ပင်ကြီးကို သိပ်ချစ်သလို ပန်းသီးပင်ကြီးကလည်း ကောင်လေးကို အဖော်လုပ်ပေးနေရတာ သိပ်သဘောကျသပေါ့။
အဲလိုနဲ့ အချိန်တွေလည်း တရွေ့ရွေ့ကုန်သွားရောဆိုပါစို့။
ကောင်ကလေးကလည်း အရွယ်လေး မသိမသာ ရောက်လာတာနဲ့အတူ ပန်းသီးပင်ကြီးဆီကိုလည်း ခါတိုင်းလို နေ့စဉ် မရောက်ဖြစ်တော့ဘူး။
တစ်နေ့ကျတော့ ကောင်ကလေးဟာ ပန်းသီးပင်ကြီးဆီကို မသာယာလှတဲ့ မျက်နှာနဲ့ ရောက်လာတယ်။
“လာလေ… ကောင်လေး၊ ငါနဲ့ ကစားရအောင်ကွာ…”
ပန်းသီးပင်ကြီးက ကောင်ကလေးကို ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
“ကျွန်တော် ကလေးမဟုတ်တော့ဘူးဗျ။ သစ်ပင်တွေနဲ့ ကျွန်တော် မဆော့တတ်တော့ဘူး။ ကျွန်တော်က အရုပ်တွေ၊ ကစားစရာတွေနဲ့ပဲ ဆော့ချင်၊ ကစားချင်နေတယ်ဗျာ။ ခက်တာက ကျွန်တော့်မှာကလည်း အရုပ်တွေ၊ ကစားစရာတွေ ဝယ်ဖို့ ပိုက်ဆံ မရှိဘူး”
“အေး… ငါ့မှာလည်း ပိုက်ဆံတော့ မရှိဘူး ကောင်လေးရဲ့။ ဒါပေမယ့် ငါ့အသီးတွေ အားလုံးကို ခူးပြီး ပြန်ရောင်းမယ်ဆိုရင် မင်းလိုတဲ့ ပိုက်ဆံရမှာပေါ့ မောင်…”
သည်စကားလည်း ကြားရရော ကောင်ကလေးလည်း ပျော်သွားတယ်။ ဟုတ်သားပဲ၊ ပန်းသီးတွေ ခူးပြီး ရောင်းလိုက်လို့ကတော့ ပိုက်ဆံတွေ ဖြစ်လာမှာ သေချာတာပေါ့။ ဒါနဲ့ သူလည်း ပန်းသီးပင်ကြီးပေါ်မှာ သီးနေတဲ့ ပန်းသီးတွေအားလုံးကို ခူးဆွတ် ထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်။
အဲဒီ့နောက်မှာတော့ ကောင်ကလေးဟာ ပန်းသီးပင်ကြီးဆီကို တော်တော်နဲ့ ရောက်မလာပြန်တော့ဘူး။ ပန်းသီးပင်ကြီးကတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတော့တာပေါ့လေ။
အဲလိုနဲ့ အကြာကြီးကြာခါမှ တစ်နေ့မှာ ကောင်ကလေးဟာ ပန်းသီးပင်ကြီးဆီကို ပြန်ရောက်လာတယ်။ ပန်းသီးပင်ကြီးကလည်း ကောင်ကလေးကို တွေ့ရရော ပျော်သွားတော့တာပေါ့။
“လာကွာ၊ မင်းနဲ့ မကစားရတာကြာပြီ၊ ကစားကြရအောင်…” ပန်းသီးပင်ကြီးက ဝမ်းသာအားရ ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
“ကျွန်တော့်မှာ ကစားဖို့ အချိန်မရှိဘူးဗျာ။ ကျွန်တော့် မိသားစုအတွက် အလုပ်လုပ်ရဦးမယ်ဗျို့။ မိသားစုနေဖို့အတွက် အိမ်တစ်လုံး လိုနေလို့ စိတ်ညစ်နေတာဗျ။ မကူညီနိုင်ဘူးလား”
“အင်း… ငါ့မှာ အိမ်တော့ ဘယ်ရှိမလဲ ကောင်ကလေးရဲ့။ ဒါပေမယ့် မင်း ငါ့သစ်ကိုင်းတွေ ခုတ်ပြီး အိမ်ဆောက်မယ်ဆိုရင် မဖြစ်ဘူးလားကွဲ့။ ခုတ်ယူပါလား…”
ဒါနဲ့ ကောင်ကလေးကလည်း ပန်းသီးပင်ကြီးရဲ့သစ်ကိုင်းတွေကို အားရ ပါးရခုတ်ယူပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ထွက်သွားပြန်ပါရော။ ပန်းသီးပင်ကြီးကလည်း ကောင်ကလေး ပျော်နေတာမြင်တော့ သူပါ ပျော်သွားတော့တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ထုံးစံအတိုင်းပါပဲ၊ ကောင်ကလေး ပျောက်သွားပြန်ပါတော့တယ်။ ပန်းသီးပင်ကြီးကတော့ အထီးကျန်ဘဝမှာ ထိခိုက်ကြေကွဲနေရပြန်တော့တာပေါ့။
အဲလိုနဲ့ ပူပြင်းလှတဲ့ နွေတစ်ရက်မှာ ကောင်ကလေး ပြန်ပေါ်လာပြန်တယ်။ အပင်ကြီးကလည်း ဝမ်းသာအားရပဲပေါ့။
“လာကွာ၊ မင်းနဲ့ ငါနဲ့ ကစားကြရအောင်…”
“မကစားနိုင်ပါဘူး ပန်းသီးပင်ကြီးရယ်၊ ကျွန်တော် စိတ်ညစ်နေတယ်ဗျ။ အသက်ကလည်း ကြီးလာပြီလေ။ နားနားနေနေလေး နေချင်လိုက်တာဗျာ။ လှေကလေးတစ်စီးနဲ့ ရွက်လွှင့်ရင်း အေးအေးလူလူ နားချင်လိုက်တာ။ ကျွန်တော့်အတွက် လှေတစ်စီးလောက် ရှာမပေးနိုင်ဘူးလား”
“ငါ့ပင်စည်ကို ခုတ်လှဲပြီး လှေလုပ်လိုက်ပါလား ကောင်ကလေးရယ်၊ ဒါပဲ ငါတတ်နိုင်တယ်လေ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မင်းကြိုက်တဲ့နေရာကို လှော်ခတ်သွားပြီး ပျော်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ကွာ…”
ဒါနဲ့ ကောင်ကလေးလည်း ပန်းသီးပင်ကြီးရဲ့ပင်စည်ကို ခုတ်ပြီး လှေတစ်စီး လုပ်လိုက်တော့တာပေါ့။
လှေလည်းရရော ကောင်ကလေးကလည်း ပင်လယ်ပြင်ကျယ်ကြီးထဲကို ရွက်လွှင့်သွားလိုက်တော့တာ တော်တော်နဲ့ကို ပြန်ရောက်မလာတော့ပြန်ဘူး။
အဲဒီကနေ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အခါမှာတော့ ကောင်ကလေး ပြန်ရောက်လာပြန်ပါတော့တယ်။
“သည်တစ်ခါတော့ ငါ့မှာ မင်းကို ပေးစရာ ဘာမှမရှိတော့ဘူး ကောင်ကလေးရဲ့။ ပန်းသီးတွေလည်း ကုန်ပြီ…”
“ကျွန်တော့်မှာလည်း ပန်းသီးကိုက်နိုင်တဲ့သွားတွေ မရှိတော့ပါဘူးဗျာ…”
“မင်းတွယ်တက်ဖို့ သစ်ကိုင်းတွေလည်း ငါ့မှာ မရှိတော့ဘူး”
“ကျွန်တော်လည်း သစ်ပင်မတက်နိုင်တော့ပါဘူး၊ အိုပါပြီဗျာ”
“မင်းကိုပေးစရာ ငါ့မှာ ဘာဆို ဘာမှမကျန်တော့ဘူး ကောင်ကလေး။ ငါ့ဆီမှာ ကျန်တာဆိုလို့ သေတော့မယ့် အမြစ်တွေပဲ ရှိတော့တယ်နော်”
ပန်းသီးပင်ကြီးက ပြောရင်းနဲ့ မျက်ရည်လည်လာတယ်။
“ကျွန်တော်လည်း ဘာမှ မလိုချင်တော့ပါဘူး ပန်းသီးပင်ကြီးရယ်။ ကျွန်တော်လိုချင်တာက နားခိုစရာနေရာလေး တစ်နေရာပါပဲ။ ကျွန်တော့် ဘဝမှာ သိပ်ကို ပင်ပန်းလှပါပြီ”
“ဒါဆို အတော်ပဲပေါ့၊ ကောင်ကလေးရဲ့။ သစ်ပင်အိုကြီးတွေရဲ့ အမြစ် ဆိုတာ မှီလို့အုံးလို့ကောင်းတဲ့ နားစရာနေရာအစစ်ပဲလေ။ ထိုင်ကွာ၊ ထိုင်၊ ထိုင်၊ ငါနဲ့အတူ ထိုင်ပြီး မင့်စိတ်တိုင်းကျ နားလိုက်စမ်းကွာ…”
ကောင်လေးလည်း ပန်းသီးပင်ရဲ့အမြစ်တွေဘေးမှာ ထိုင်ချလိုက်ပါ တယ်။ ပန်းသီးပင်ကြီးကလည်း မျက်ရည်တွေကြားကပဲ ကြည်ကြည်နူးနူးြုပံးလိုက်ပါတော့တယ်။
သည်ပုံပြင်လေးဟာ ကျွန်တော်တို့တွေ အားလုံးအတွက်ပါ။
ပန်းသီးပင်ကြီးဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေမေ၊ ဖေဖေပါ။ ငယ်တုန်းက မေမေတို့၊ ဖေဖေတို့နဲ့ကစားခဲ့ရတာကို ကျွန်တော်တို့တွေ ဘယ့်ကလောက် ပျော်ခဲ့ကြသလဲ။
အဲ… အရွယ်လေးလည်းရောက်လာရော ကျွန်တော်တို့လည်း မေမေနဲ့ ဖေဖေကို ထားရစ်ခဲ့ကြတာပါ။ ကိုယ်လိုချင်တာလေးရှိမှ၊ ကိုယ့်မှာ ဒုက္ခနဲ့ ကြုံရခါမျိုးကျတော့မှ မေမေတို့၊ ဖေဖေတို့ဆီ ပြန်ရောက်ရတော့တာပါပဲ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိဘဆိုတာကလည်း သူတို့မှာ ရှိရှိသမျှတွေကို ပေးရင်း ကိုယ့်သားသမီးလေးတွေ စိတ်ချမ်းသာအောင် ဆောင်ရွက်ပေးကြတဲ့သူချည်းပါပဲ။
စာဖတ်သူ လူကြီးမင်းများအနေနဲ့ ပုံပြင်ထဲက ကောင်လေးဟာ ပန်းသီးပင်ကြီးအပေါ်မှာ တော်တော့်ကိုရက်စက်အားတယ်လို့ ထင်မိပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့အားလုံးကရော၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမိနဲ့အဘအပေါ်မှာ အဲသလိုပဲ ဆက်ဆံဖြစ်ခဲ့၊ ရသမျှ အကုန်ယူဖြစ်ခဲ့ကြတာချည်းပဲ မဟုတ်ပါ လား။
စာဖတ်သူလူကြီးမင်းရဲ့မိတ်ဆွေတွေကို သည်ပုံပြင်လေးကို လက်ဆင့်ကမ်း ပြောပြကြပါ။
ပြီးရင် ကိုယ့်မိကိုယ့်ဘကို ရိုသေ ချေငံစွာ၊ ချစ်ခင်မြတ်နိုးစွာ ဆက်ဆံနိုင်ကြအောင် ကြိုးစားကြပါတော့…
သည်စာကို ရေးတဲ့အတွက် ကျွန်တော့်မေမေက ကျွန်တော့်ကို ရယ်ပွဲဖွဲ့ကောင်း ဖွဲ့ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ဟာ မေမေ့အပေါ်မှာ ဘယ်တုန်းကမှ မကောင်းခဲ့တဲ့ သားမိုက်တစ်ဦးသာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်သက်လုံး ထင်ရာစိုင်း၊ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာပဲ ကိုယ်ကြည့်၊ ဘေးဘီကို လုံးလုံးမငဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်ဉာဉ်ဟာ မေမေအပါအဝင် ကျွန်တော့်ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုလုံးကို ထိခိုက်နာကျင်စေခဲ့မှာ အသေအချာပါပဲ။
ကနေ့အခါမှာ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ပန်းသီးပင်ကြီး တစ်ပင် ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ ကြီးကောင်လေးဝင်ခါစ သမီးက ဇလေးတွေ ပြလာတဲ့အခါ ကျွန်တော့်ရင်မှာ ရှတတ ဖြစ်ရပါတယ်။ သားလေးကတော့ ငယ်သေး၊ နုသေးတဲ့အတွက် ပန်းသီးပင်ကြီးနဲ့ ကစားလို့ ကောင်းတုန်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူလည်း နောင်များ မကြာခင်နှစ်များ အတွင်းမှာ ပန်းသီးပင်ကြီးကို စွန့်ခွာသွားဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ့အခါကျ ကျွန်တော့်ရင်မှာ ရှတတဖြစ်ရဦးမှာပါ။ ဒါကိုပဲ တချို့ကတော့ ဝဋ်လည်တယ်လို့ ပြောကောင်းပြောပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော့်အမြင်မှာတော့ ဒါဟာ ရှောင်လွှဲလို့ မရတတ်နိုင်တဲ့ သဘာဝတရားပါပဲ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်တုန်းကမှ၊ ဘယ်သူ့အပေါ်မှာမှ သိပ်မကောင်းခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဟာ စာဖတ်သူလူကြီးမင်းများအတွက် ဆင်ခြင်စရာ စာကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို တင်ပြနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဖြင့် အထိုက်အလျောက် ကျေနပ်စရာကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ၊ ကျွန်တော် စာရေးသူဖြစ်လာရာမှာ အဓိက လက်ဦးဆရာဖြစ်ခဲ့သူ မေမေ့ကို သည်စာလေးနဲ့ လေးမြတ် ရိုကျိုးစွာ ရှိခိုးကန်တော့လိုက်ပါရစေ ခင်ဗျား။
စာမူရဲ့ အဆုံးက အထက်ပါ မှတ်ချက်ကို စာအုပ်အဖြစ် ပုံနှိပ်ဖော်ပြရာမှာ “နေပျော်တဲ့ဘ၀ ကြည်မြတဲ့ဘ၀င် ရွှင်လန်းတဲ့စိတ်” စာအုပ်ရဲ့ ပထမအကြိမ်မှာရော ဒုတိယအကြိမ်မှာပါ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ခုတော့ သတ်သတ်စီ ခွဲလိုက်ရပါတယ်။
သည်စာမူလေးကြောင့် “နေပျော်တဲ့ ဘ၀…” တစ်အုပ်လုံးကို အင်တာနက်မှာ ပြန်တင်ဖို့ အကြောင်းဖန်လာတာပါ။ အလင်းတန်းဂျာနယ်မှာ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်က စတင်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၂ နှစ်နီးပါးကပေါ့။ နောက် ၂၀၀၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာမှာ လုံးချင်းထွက်တော့ သည်စာမူ ပါတယ်။ ၂၀၀၆ အောက်တိုဘာမှာ အဲဒီ့ လုံးချင်းပဲ ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် ပြန်ထွက်တယ်။ ကျွန်တော် ထုတ်ထားသမျှ စာအုပ်တကာ အနက်မှာ ရောင်းအကောင်းဆုံး စာအုပ်ဖြစ်သလို သည်တစ်အုပ်တည်းနဲ့ လုံးချင်းလောကမှာလည်း “အတ္တကျော်”ရယ်လို့ ရပ်တည်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
သို့ပေမယ့် ဆယ်နှစ်ကြာရင်တော့ လစ်ပြီ အမှတ်နဲ့ပဲလား၊ ရိုးသားစွာ မှားတာပဲလား မသိဘူး။ သည်တစ်ပုဒ်အပါအ၀င် အဲဒီ့စာအုပ်ထဲက စာတွေကို ဆင်တူရိုးမှားလိုလို၊ ဘာလိုလိုနဲ့ နာမည်လှလှ သုံးထားသူတစ်ယောက်က အင်တာနက်ပေါ်မှာတင်နေတာ တွေ့လာရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကြီး သက်ရှိထင်ရှား ရှိနေဆဲ၊ အင်တာနက်ပေါ်မှာလည်း ကျွန်တော် အထင်အရှား ရှိနေဆဲပေမယ့် အတောင့်လိုက် ခံနေရပါတယ်။ တစ်ပုဒ်တလေ၊ နှစ်ပုဒ် နှလေဆိုရင်တော့လည်း မသိလို့ မှားတာလို့ နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အပုဒ်ရေ နည်းနည်း များလာတော့ သံသယပွားစရာ ဖြစ်လာတာလည်း အမှန်ပါ။
ပိုဆိုးတာက သည်တစ်ပုဒ်ကို မိတ်ဆွေ “စာရေးဆရာ တစ်ယောက်ရဲ့ သမီး”က စာတည်းချုပ်အဖြစ် ကြီးကြပ် စီစဉ် ထုတ်ဝေနေတဲ့ အပတ်စဉ်ဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြထားတာပါပဲ။
သည်အဖြစ်တွေကြောင့် သည်စာမူတွေကို အင်တာနက်ပေါ် ကျွန်တော့်မှာ ကြိုးစား ပမ်းစား ပြန်တင်နေရတော့တာပါပဲ။
Author lettwebawPosted on 15 August 2012 15 August 2012 Categories Reproduction, Translation, Uplifiting
11 thoughts on “The Apple Tree”
Kyaw Lwin Phyo says:
15 August 2012 at 9:34 am
ဒီ ဆောင်းပါးကိုက နိုင်ငံခြား ဆောင်းပါး ကို မှီးထားသလားလို့….
15 August 2012 at 9:47 am
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ… မှီးတာကို မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာသာပြန်တာပါ။ အောက်ဆုံးက tags တွေထဲမှာ Reproduction, Translation, Uplifting လို့လည်း အတိအကျ ပါပါတယ် ခင်ဗျ။ ဒါတွေကို အစဉ်အဆက် ဖတ်လာမယ်ဆိုရင် ဘယ်က ရတယ်ဆိုတာလည်း အတိအကျ ပြောပြီးသားပါခင်ဗျ။ အဲဒီ့ တစ်အုပ်လုံးမှာ ပါတဲ့ စာတွေထဲမှာ နှစ်ပုဒ်သာ ပင်ကိုရေးဖြစ်ပြီး ကျန်တာတွေ အားလုံးက ကျွန်တော့်ဆီ ရောက်လာတဲ့ ဓာတ်ချောစာ (email) တွေကို ဘာသာပြန်တာလို့လည်း စာအုပ်ထဲမှာ အတိအလင်း ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျ။ 😦
15 August 2012 at 10:04 am
ဟုတ်ကဲ့ ကျနော် tags တွေကို မတွေ့လိုက်မိလို့ပါ။
နောက်ပြီး အဲ့ဒီ ဆောင်းပါးကိုပဲ လူတကာ က သံတူကြောင်းကွဲ ဘာသာ ပြန်နေကြတာတွေ တွေ့မိတော့ ကောမန့် ရေးမိသွားတာပါ။
နည်းနည်း အဆိုးမြင်မိသွားပါတယ် ဆောရီးပါ။း)
ရပါတယ်ဗျာ။ ရှင်းရမှာက ကျွန်တော့် တာဝန်ပါ။ တစ်ခု ရှိတယ်နော်။ “လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၂ နှစ်က”ဆိုတဲ့အချက်က အလွန် အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျား။
15 August 2012 at 11:40 am
တကယ်တော့ သည်တစ်ပုဒ်က တော်တော့် ရှော့ရှိသွားတယ်။
ပထမဆုံးက ကျွန်တော့်စာမူ ဖော်ပြပြီး ငါးနှစ် ခြောက်နှစ် မကချိန်၊ ကျွန်တော့် စာအုပ် ထွက်ပြီး ၄-၅ နှစ်မှာ သည်အပုဒ်ကိုပဲ ကျွန်တော့် မိတ်ရင်းဆွေချာ ကဗျာဆရာ မင်းထက်မောင်ကပဲ ဘာသာပြန်ပြီး မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်မှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် ပြန်ပြီးသားမှန်း သူ မသိလိုက်တာ သေချာပါတယ်။ သူပြန်တာကိုလည်း ကျွန်တော် ဖတ်ခွင့်မရပါဘူး။ သိခွင့်ရတာက စာပေ ဂုရုကြီးတစ်ဆူလို့ သည်ဘက်ခေတ်မှာ ယူဆထားကြလေတဲ့ ဆရာ “ထက်မြက်”က အဲဒါကို နောက်မဂ္ဂဇင်း တစ်စောင်မှာ ချီးကျူးစာ ရေးချလိုက်လို့ပဲ ခင်ဗျ။
ဆရာ ထက်မြက်ဆိုတာ ရွှေအမြုတေ စာပေဆု ရွေးချယ်ရေး ကော်မတီမှာ ပထမအကြိမ်ကတည်းက ပါဝင်ခဲ့ပြီး ကော်မတီရဲ့ အစီအရင်ခံစာတွေကို နှစ်စဉ် ဖတ်ကြားခဲ့ဖူးသူပါ။ စာဖတ်နာတယ်လို့ သတ်မှတ်ခံထားရသူ တစ်ဦးပေပဲပေါ့။ သူလို ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးက ကျွန်တော် ရေးထားမှန်း မသိဘဲ (မသိဆို ကျွန်တော်ကမှ အရောင်မှ မရှိတာကိုးဗျာ 😛 ) သူများက နောက် လေး-ငါးနှစ်ကြာမှ ဘာသာပြန်ထားတာကို ကောက်ဖတ်ပြီး လွှတ်ချီးကျူးပစ်လိုက်တာကိုး။
သူတင်လားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အတ္တကျော်ရဲ့ ပထမဆုံး စာမူ “ခင်မင်မှု သံမှိုများ”ကို ဖော်ပြခဲ့တာ ဆရာ ဦးဝင်းငြိမ်းရဲ့ “အလင်းတန်း ဂျာနယ်”မှာပါ။ အဲဒါကိုပဲ နောက် ခုနစ်နှစ်လောက် အကြာမှာ ဆရာမ မြနှောင်းညိုက ဆရာ ဦးဝင်းငြိမ်းပဲ ဦးစီးလေတဲ့ Teen မဂ္ဂဇင်းမှာ ရေးတော့ ဖော်ပြပေးခဲ့ပြန်သဗျ။ အလွန် စေ့စပ်သလောက် အလုပ်များလှတဲ့ ဆရာ ဦးဝင်းငြိမ်း မျက်စိလျှမ်းသွားတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အခုလည်းပဲ တခြား ဂျာနယ်တစ်စောင်မှာ သည်တစ်ပုဒ်ကို ဘာသာပြန်ဖူးသူ တစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ဆီကို တောင်းပန်စာ တစ်စောင် ပို့လာပြန်ပါတယ်။ သူ မသိလိုက်လို့ပါ ဆိုပြီး ရိုးရိုးသားသား တောင်းပန်တာပါ။ ကျွန်တော်လည်း သူ ပြန်ထားမှန်း မသိပါဘူး။ မသိဆို သူပြောတဲ့ ဂျာနယ်ကို လှပ်တောင်မှ မကြည့်ခဲ့ဖူးပဲကိုး။
ကြည့်ရတာ အင်တာနက်ကို သုံးနိုင်သူ များလာတဲ့အခါ ကိုယ်ဖတ်မိတာလေးတွေထဲက ကောင်းတာလေးတွေကို ကျွန်တော့်လိုပဲ လက်ဆင့်ကမ်း မျှဝေပေးချင်စိတ်နဲ့ ဘာသာပြန်မိကုန်ကြပုံပါပဲ။
သေချာတာတစ်ခုကတော့ သည်အဖြစ်တွေကြောင့် ကျွန်တော့်မှာ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု ရှိနေခဲ့တာ သုံးနှစ်လောက်တောင် ရှိပါပြီ။ သည်လို စာတို ပေစတွေ သေလုအောင် ကောင်းနေစေဦးတော့ ဘယ်တော့မှ ဘာသာ မပြန်တော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အားကုန်တယ်။ စာဖတ်သူတွေအတွက်လည်း နစ်နာပါတယ်။ သည်တစ်ပုဒ်ထဲကို ၄-၅ ယောက် ၀ိုင်းပြန်နေကြမယ့်အစား တခြား ပြန်စရာ အများအပြားရှိနေတဲ့၊ အင်္ဂလိပ်လို ရေးထားတဲ့ စာတွေ အပုံကြီး ကျန်နေပါသေးတယ်။ အဲဒါတွေဘက် လှည့်လိုက်တာဟာ စာဖတ်ပရိသတ်အတွက် ပို အကျိုးများမှာလည်း သေချာနေပါတယ်လေ။
နာမည်လှလှနဲ့ ဆရာ့စာတွေကို အလွဲသုံးစား လုပ်နေတာ ဘယ်ဘလောဂ့်လဲဟင်။ ဆရာ့ ဘလောဂ်ကိုပဲ အမြဲတမ်းဖတ်နေတာဆိုတော့ မသိလို့ ပါ။ သူတောင် အားမနာတမ်း ပေါ်တင် တင်ရဲသေးရင် ဆရာက ဘာဖြစ်လို့သူ့ ဘလောဂ့်နာမည်ကို ဖော်မပြပဲထားတာလဲဟင်။
16 August 2012 at 10:52 am
သူက ကျင့်ဝတ် မစောင့်စည်းပေမယ့် ကိုယ့်ဘက်က စောင့်စည်းသင့်တယ်လို့ နားလည်လို့ မဖော်ပြတာပါခင်ဗျား။ ဘယ်သူ တရားပျက်ပျက်၊ ကိုယ်မပျက်အောင် ထိန်းသိမ်းတဲ့ သဘောပေါပဲ။
” သေချာတာတစ်ခုကတော့ သည်အဖြစ်တွေကြောင့် ကျွန်တော့်မှာ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု ရှိနေခဲ့တာ သုံးနှစ်လောက်တောင် ရှိပါပြီ။ သည်လို စာတို ပေစတွေ သေလုအောင် ကောင်းနေစေဦးတော့ ဘယ်တော့မှ ဘာသာ မပြန်တော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အားကုန်တယ်။ စာဖတ်သူတွေအတွက်လည်း နစ်နာပါတယ်။ သည်တစ်ပုဒ်ထဲကို ၄-၅ ယောက် ၀ိုင်းပြန်နေကြမယ့်အစား တခြား ပြန်စရာ အများအပြားရှိနေတဲ့၊ အင်္ဂလိပ်လို ရေးထားတဲ့ စာတွေ အပုံကြီး ကျန်နေပါသေးတယ်။ အဲဒါတွေဘက် လှည့်လိုက်တာဟာ စာဖတ်ပရိသတ်အတွက် ပို အကျိုးများမှာလည်း သေချာနေပါတယ်လေ။”
ဆရာ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လေးစားပါတယ် ဆရာ။
18 September 2012 at 9:53 pm
၁။ သားတို့ ဖတ်ဖို့ စာအုပ် ဘယ်နေမှာ ဝယ်ရင် ရနိုင်ပါသလဲ။ အမေ့အိမ် နဲ့ စာပေလောက မှာ မေးတာ ကုန်နေတယ် ပြောလို့ပါ။ ( စာအုပ်ဆိုင်တွေက မတင်ပေမယ့်လည်း ကုန်နေတယ် ပြောတတ်လို့ပါ )။
၂။ ဖြစ်နိုင်ရင် ကောင်းတာလေးတွေ ဘာသာဆက်ပြန်ဖို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ ဥပမာ ရောင်းတယ်၊ ဝယ်တယ် အပုဒ်လေး ဖတ်ပြီး ချစ်ခင်သူတွေ အတွက် အချိန်ပေးဖို့ လိုတယ် ဆိုတဲ့ message လေး ရလိုက် လို့ပါ။
၃။ ဒီတပုဒ်မှာတော့ ပန်းသီးပင်ကြီးဆိုတာ စ ဖတ်မိတော့ ဘဝင် မကျ ဖြစ်သွားပါတယ်၊ ပင်စည်ကို လှေထွင်းတယ် ဆိုတော့ ပိုဆိုးသွားပါတယ်။၁၀-၁၂ ပေ လောက်ပဲ မြင့်တယ်လို့ သိထားလို့ပါ။ internet မှာ ရှာကြည့်တော့ (vigorous, semi-stem 14-20ft) ရှိတာတော့ တွေ့ရပါတယ်။ ပင်စည်က လူစီးရလောက်အောင် လှေထွင်း လို့ ရလောက်မယ် လို့တော့ မထင်ပါ။
(၁) ကျွန်တော့်စာအုပ်တွေကို စာပေလောက ၂ ၊ စာပေလောက ၅ ၊ အင်းဝ စာအုပ်တိုက်၊ အရုဏ်သစ်စာပေ စတာတွေမှာ ရနိုင်ပါတယ်။
(၂) ကျွန်တော် အဲဒါမျိုးတွေကို လုံးဝ ဘာသာမပြန်တော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ ဒါမျိုးတွေကို လိုက်ဘာသာပြန်တဲ့သူတွေ ပေါလွန်းမက ပေါလာလို့ သူတို့တွေကို အလှည့်ပေးလိုက်တာပါ။
(၃) မှန်ပါတယ်။ သို့သော် အဲဒီ့အချက်က အရေးကြီးမလား၊ ဒါမှမဟုတ် စာရေးသူ ပါးချင်တဲ့ သတင်းစကားက ပိုအရေးကြီးသလားဆိုတာ ဆင်ခြင်ဖို့ လိုမယ် ထင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဆရာပြောတာ မှန်ပါတယ်။ စာဖတ်သူကို aပးချင်တဲ. message ကသာ ဒီနေရာမှာ အရေးကြီးတာပါ။ အဓိကက လိုရင်းပါ။ aနာက် သူများပြန်တိုင်း လိုက်ပြန်ရင် ဒီပုတ်ထဲက ဒီပဲပဲ ဖြစ်မှာပေါ.။ လေးစားပါတယ် ဆရာ။
Previous Previous post: The Law of the Jungle and the Modernised Urban Life
Next Next post: Introducing democracy